Semalt: orinasa an-tserasera mahomby
Ekipa Semalt: Manampahaizana momba ny serivisinao
Fampidirana ho an'ny serivisy marketing digital
Fahombiazana mahomby miaraka amin'ny Semalt. Ahoana?
Tantara momba ny fahombiazana Semalt
Ny tsipika ambany
Isaky ny fanavaozana vaovao avy amin'ny milina fikarohana dia mitaky ny tompona orinasa ny tahotra amin'ny tsy fantatra. Fanontaniana iray miparitaka eran'izao rehetra izao - "Ahoana ny hampitana ny tranokalako amin'ny pejy voalohany an'ny Google?"
Mba hampivoarana tranokala eo amin'ny pejy voalohany amin'ny milina fikarohana, mila mifantoka amin'ireo lafin-javatra SEO samihafa ianao. Satria ny tompona orinasa rehetra tsy mahay mifehy ny zavakanto SEO, maro ny masoivoho marketing nomerika no mampanantena azy ireo hanampy azy ireo.
Mety tsara izany, saingy masoivoho vitsivitsy ihany no azo atokisana rehefa tonga eo amin'ny laharan'ny tranokala eo amin'ny pejy voalohany amin'ny masinina fikarohana. Ankehitriny, anarana iray aorian'ny fahombiazan'ny orinasa an-tserasera maro dia Semalt. Tohizo ny famakiana mba hahitana bebe kokoa momba azy.
Semalt dia naorina tamin'ny 2013 ho orinasa IT voalohany. Ny foibeny dia ao Kyiv, Ukraine.
Manolotra serivisy marketing Internet mahomby izy amin'ny vidiny mora. Semalt dia mikendry ny serivisy amin'ny tompona orinasa, manam-pahaizana momba ny marketing, mpandinika, ary webmaster manerantany.
Amin'ny voalohany, Semalt dia manolotra izao manaraka izao:
Fampiroboroboana SEO avo lenta
Lahatsary fampiroboroboana ho an'ny Business
Mba hahitana raha mahomby na tsia ny masoivoho marketing ara-barotra nomerao dia fantaro hoe inona no tombony azon'ny mpanjifany. Ankoatra ny fanatratrarana ny orinasanao amin'ny haavo vaovao, misy tombony azonao bebe kokoa ihany koa amin'ny Semalt:
Ny matihanina talenta dia misy 24x7
Nanompo mpanjifa 300.000
Ny serivisy kalitao ambony indrindra atolotra amin'ny vidiny ambany indrindra
Ny rafitra misy fihenam-bidy mora ampiasaina amin'ny mpanjifa
Ny masoivarotra marketing dizitaly dia afaka manome valiny lehibe isaky ny manana ekipa manana saina mamorona, talenta, mihetsika ary mazoto.
I Semalt dia mirehareha fa manana ekipa feno amin'ireto toetra ireto. Miaraka amin'ny ekipa Semalt , azonao ny saina mihoatra ny 115 amin'ireo eritreritra tsara indrindra amin'ny indostrian'ny serivisinao.
Ireo manam-pahaizana ireo dia voalohany no nahafantatra ny filàn'ny orinasanao ary avy eo mitambatra ny teknolojia amin'ny traikefany hanomezany vokatra mahasoa.
Ny ezaka iraisan'izy ireo dia mampiroborobo ny fisian'ny orinasa an-tserasera. Ireo mpanjifa mety hitranga dia afaka mahita ny tranokalanao amin'ny toerana ambony kokoa amin'ny SERPs (Pejy Fikarohana Fikarohana fikarohana).
Ny hahafantarana an'i Semalt sy ny serivisy dia zava-dehibe izay fantatrao, farafaharatsiny, ny fototry ny Marketing Digital.
Ny SEO dia mijoro ho an'ny Search Engine Optimization. Ny fizotran'ny fikarohana ny votoatin'ny tranokala iray, noho izany dia misandratra avo lenta amin'ny lisitry ny milina fikarohana.
Ao amin'ny SEO, misy anao, milina fikarohana, ary ilay olona mitady zavatra. Mety ho tompona orinasa / manam-pahaizana momba ny marketing / mpandinika / webmaster ianao, ary matetika ny Google ny fikarohana ny fikarohana.
Aoka hatao hoe manoratra lahatsoratra anaty bilaogy ianao miresaka momba ny mahasoa ny fifadian-kanina. Ary, mila mampiasa ny milina fikarohana ianao ho valiny ambony indrindra rehefa misy mikaroka ny teny fanalahidy, mahasoa ny fifadian-kanina.
Ho an'izany, tokony araraotinao ny lahatsoratra amin'ny bilaogy. Google dia hampiseho izany ho iray amin'ireo vokatra ambony indrindra rehefa misy olona mitady an'io teny io.
Raha te hahalala tsara kokoa momba ny SEO ianao dia jereo ny torolàlana SEO tsy maintsy misy mari-pahaizana ho an'ireo vao manomboka.
Inona ny atao hoe Website Analytics?
Izy io dia fizotry ny fanangonana, famakafakana ary famoahana ny angon-drakitra tranonkala iray. Izy io dia manampy ny tompona orinasa hahalala sy hanatsara ny fahombiazan'ny tranonkalany.
Amin'ny alàlan'ny tranokala Website, ny tompona orinasa dia mianatra momba ireo fihetsika sy fihetsiky ny mpitsidika ao amin'ny tranonkalany ity:
Firy ny olona nitsidika an'io tranonkala io?
Izy ireo ve no namangian'izy ireo voalohany, sa izy ireo mitsidika mpitsidika?
Hafiriana no nijanonany tao amin'ilay tranokala?
Firy ny pejy azon'izy ireo?
Iza no pejy azon'izy ireo?
Ahoana no nahatongavan'izy ireo tao amin'ilay tranokala - tamin'ny alàlan'ny rohy na mivantana?
Ary, betsaka kokoa.
Inona no atao hoe SSL?
Ny SSL dia mijoro ho an'ny Layer Sockets Layer. Teknolojia fiarovana mandroso izay mampifandray an-tranonkala iray sy mpizara lozisialy amin'ny alàlan'ny rohy azo antoka.
Matetika ny angon-drakitra nafindra anelanelan'ireo mpizara web sy navigateur dia amin'ny endrika tsotra tsotra. Raha manala ny angon-drakitra alefa eo anelanelan'ny mpizara web sy browser iray izy ireo, dia mety hanararaotra izany izy ireo.
Hamarinin'ny SSL fa mijanona ho tsy miankina ny andiany rehetra. Raha mila fanazavana bebe kokoa, mandehana ny torolàlana ho an'ny beginner amin'ny SSL: Inona ny & Itony manamafy kokoa ny tranokalanao.
Inona no atao hoe Link Building?
Izy io no fizotran'ny fahazoana rohy mety amin'ny tranokala hafa mankany amin'ny tranokalanao.
Ny tanjon'ny fizotran'ny rohy Link dia ny fitarihana rohy avo lenta amin'ny tranokalanao. Mampitombo ny mety hisian'ny laharan'ny tranokalanao ao amin'ny SERPs (Pejy fikarohana valin'ny fikarohana).
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fizotran'ny Link Building, dia afaka mandia ity pejy Wikipedia ity .
Ny portfolio-n'ny vokatra Semalt dia manana serivisy marketing Digital. Ireo tompona varotra tombony dia azon'izy ireo rehefa misafidy ny Semalt izy dia ny ankamaroan'ny serivisy dia mifanaraka amin'ny filàn'ny orinasa.
Ny lehibe indrindra dia:
AutoSEO dia fitaovana SEO tokana natao ho an'ny tompona orinasa / manam-pahaizana momba ny marketing / mpandinika / webmaster izay:
Te hampitombo ny fisian'izy ireo sy ny varotra
Tsy dia zatra loatra amin'ny SEO sy ny fanaony
Aleonao aloha hahita ny valiny alohan'ny hanolorana ny volany amin'ny zavatra iray
Fotoana fohy taorian'ny fisoratanao ny AutoSEO dia handefa tatitra fohy aminao ny mpandinika ny tranokala. Hanoroana hevitra izany raha mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria ny tranonkalanao sy ny zavatra azonao atao mba hanatsarana ny toerany ao amin'ny motera fikarohana.
Soa azo avy amin'ny AutoSEO
Ny tombontsoa voalohany amin'ny AutoSEO dia:
Optimizing tranonkala: miantoka fa ny tranokalanao dia mora kokoa amin'ny milina fikarohana ary manaraka ny fanaon'ny SEO mahazatra.
Manatsara ny fahitana ny tranonkala: mampiroborobo ny tranokalanao amin'ny teny manan-danja izany ary manome antoka fa miakatra avo kokoa amin'ny Google izy ireo rehefa misy mikaroka ireo teny fanalahidy ireo.
Misintona mpitsidika vaovao: miaraka amin'ny fahitana tsara sy ny fampiroboroboana mety, ny tranonkalanao dia mahasarika mpitsidika bebe kokoa. Ary, fantatrao fa ny mpitsidika bebe kokoa dia manome tombony bebe kokoa.
Manatsara ny fampirantiana an-tserasera: Mampitombo ny fisian'ny fisianana an-tserasera amin'ny sehatry ny fivarotana isan-karazany, noho izany, manokatra fotoana fitomboana marobe.
FullSEO dia fomba iray mandroso sy mahomby kokoa mba hametrahana tranonkala avo kokoa amin'ny pejy valin'ny fikarohana ao amin'ny Google.In FullSEO, manampahaizana momba ny tranokala anatiny sy ivelany ny manam-pahaizana amin'ny Semalt. Izy ireo dia manome antoka fa hahazo valiny mihoatra ny faniriana ao anatin'ny fotoana fohy.
Tombontsoa amin'ny FullSEO
Ny tombontsoa voalohany amin'ny FullSEO dia:
Optimizing tranonkala: miantoka fa ny tranokalanao sy ny atiny dia mahafeno ny fenitra SEO. Hanatsara ny fanatrehanao an-tserasera ny orinasanao, ka lasa malaza kokoa izy io.
Manatsara ny kalitao rohy: FullSEO dia manaisotra rohy kalitao sy tsy mahazatra amin'ny tranokalanao. Izany dia manome antoka fa ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao dia avy amin'ny rohy avo lenta fotsiny.
Fanatsarana ny laharana tsena: manampy ny orinasa rehetra ny bisikileta hanentana ny toeran'ny tsenany ary handroso mialoha ireo mpifaninana aminy.
Valiny haingana sy tsy miovaova mandritra ny fotoana maharitra: FullSEO dia miantoka fa mahazo vokatra tsy haingana ianao fa maharitra ihany koa.
E-Commerce SEO nataon'i Semalt dia fomba iray hanatsarana mba hanampiana orinasa an-tserasera hitombo sy hiroborobo.
Ao amin'ny E-Commerce SEO, manam-pahaizana momba ny Semalt dia manome anao vahaolana tokana sy mahomby amin'ny orinasanao. Manampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasanao amin'ny tetik'asa izany.
Tombontsoa amin'ny E-Commerce SEO
Ireto misy tombony voalohany amin'ny E-Commerce SEO:
Mpiasan'ny Attrika: Ny E-Commerce SEO no kendrena voalohany amin'ny resaka famandrihana mifandraika amin'ny orinasanao. Avy eo dia natao ny drafitra fampiroboroboana mety hanampiana ny orinasanao hisarika ny mpividy vaovao.
Vokatry ny fanomezana: satria ny ankamaroan'ny fivarotana E-Commerce dia tsy omby vola, ny tompony dia manantena fa ny vola natokana amin'ny fampiroboroboana dia tokony hitondra valiny tadiavina. E-Commerce SEO dia manome antoka fa mitondra ny vokatra mahomby ao anatin'ny fotoana fohy ny fampiasam-bola aterany.
Lehibe ho an'ny teny fanalahidy ambany: Ny E-Commerce SEO dia manome antoka fa ny laharan'ny tranokalanao dia manana toerana ambony ho an'ny teny fanalahidy ambany. Ny anton'izany dia satria ny olona mitady teny fanalahidy ambany dia matetika no manao fividianana rehefa tonga any amin'ny fivarotana an-tserasera havanana.
Fandinihana mangatsiaka: Ny manam-pahaizana momba ny e-varotra sy SEO ao amin'ny Semalt dia manao famakafakana mifaninana amin'ny tontolon'ny orinasanao. Manangona ny vaovao izy ireo ary mampiasa azy io mba hametrahana ny fomba mahomby indrindra amin'ny fahombiazan'ny orinasam-barotra an-tserasera.
Izy io dia fitaovana analytics mandroso izay manampy anao manara-maso ny zava-mitranga eny an-tsena. Hamela anao koa manara-maso ny toeran'ireo mpifaninana aminao.
Manome anao ny fitaovana momba ny tranonkala an'ny Semalt Analytics:
Ny soso-kevitra momba ny teny fanalahidy amin'ny andian-teny ara-barotra ilaina
Fanaraha-maso isan'andro ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana
Salan'isa momba ny orinasanao
Fitaovana hijery sy hamantatra ny toeran'ny teny fanalahidy anao
Ny ivom-pikarohana sy ny fandinihana ireo filaharan'ny motera karatra misy anao
Tombontsoa an'ny Analytics
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny alàlan'ny tranokala Website Analytics dia:
Position tranokala fanaraha-maso: Ity fitaovana ity dia manampy amin'ny fitadiavana ny toeran'ny orinasanao amin'ny tsena. Ny fampahalalana nomeny dia ahafahanao mamantatra ireo lafin-javatra tsara sy ratsy miantraika amin'ny laharan'ny tranonkalanao.
Manara-maso ny toeran'ny mpifaninana: Ity fitaovana avy amin'ny Semalt ity koa dia manambara ny antsipiriany amin'ireo mpifaninana aminao. Azonao atao ny mampiasa ny fampahalalana omenao ho tombontsoanao.
Fanampiana amin'ny fitadiavana ireo marika vaovao: Ny angon-kafatra aorian'ny fandalinana ny orinasanao dia manampy amin'ny fitadiavana fotoana fitomboana vaovao amin'ny tsena vaovao.
Mamadika ny angon-drakitra amin'ny endrika ankehitriny: Afaka mamonjy ireo rakitra rehetra atolotry ity fitaovana ity ianao amin'ny endrika fisie PDF sy rakitra Excel.
Ny tranonkala iray manomboka amin'ny HTTPS dia azo antoka, tia an'i Google ary mahasarika mpitsidika bebe kokoa. Semalt dia manolotra mari-pankasitrahana SSL hahazoana antoka tranonkala ary tsy mora atahorana hanafika.
Semalt dia manolotra consultation SEO maimaimpoana izay ahafantaran'ireo manampahaizana manokana azy ny olana momba ny SEO amin'ny tranokalanao ary manome tolo-kevitra mba hampisondrotra ny fanatrehany an-tserasera.
Noho izany, ireo serivisy avy amin'ny Semalt ireo dia manome antoka fa ny orinasanao amin'ny Internet dia mahomby fahombiazana amin'ny kely kokoa ny fotoana.
Ireo tantara ireo dia samy momba ny dia ny mpanjifa nahomby. Ny mpanjifa sasany dia mandeha mitady serivisy tokana, ny sasany mifidy maro, ary ny sasany mandeha amin'ny consultation SEO maimaimpoana alohan'ny hiantsoana farany.
AutoSEO Client Review
Rehefa tonga amin'ny AutoSEO, tranokala mihoatra ny 5000 dia efa lehibe niaraka tamin'i Semalt. Mba hizaha ny tenanao manokana dia mandehana any amin'ny pejin'ny pejy Fahombiazana Semalt . Eto, azonao atao ny manivana ireo tranokala ireo araka ny indostria sy ny faritra.
Fijoroana vavolombelona momba ny mpanjifa
Nilaza ny isa ny rehetra, na amin'ny raharahan'i Semalt, ny mpanjifa dia milaza izany rehetra izany. Azonao atao ny mitsidika ny pejin'ny Fanamarihana an'ny mpanjifa sy mizaha fijoroana fijoroana horonantsary miisa 33 ary fijoroana ho vavolombelona 146. Jereo fotsiny ny fomba nanampiana ny mpanjifa an-jatony tamin'ny fanatsarana ny orinasany amin'ny Internet.
Cases SEO mpanjifa
Te hahatsapa ny dia fahombiazan'ny mpanjifan'ny Semalt ianao? Midira fotsiny ny pejy momba ny mpanjifan'ny mpanjifa SEO ary fantaro ireo mpanjifany sambatra izay nitombo betsaka tamin'ny serivisy SEO SEO.
Semalt dia iray amin'ireo Agence haino aman-jery vitsivitsy izay mirakitra firenena mihoatra ny 155 amin'ny SEO.
Misy mihoatra ny 210 resell amin'ny serivisy Semalt.
Mahay amin'ny fiteny maro ny mpiasan'ny Semalt. Manolotra mpanjifa izy ireo na inona na inona fiteny hiteny.
Tetikasa maherin'ny 30,000 nasain'i Semalt dia ao amin'ny lisitry ny valin'ny Top-10.
Semalt dia manana mpanadihady mpitaona tsy manam-paharoa, Turbo-The Turtle, izay tandindon'ny Semalt ihany koa. Miasa amin'ny fomba fiasa izany, mijanona ao amin'ny biraony foana.
Amin'ity tontolo nomerika ity, SEO no lakilen'ny fahombiazana. Raha manana fahalalana ampy momba ny SEO ianao ary manam-potoana hanatsarana ny tranokalanao, manaova azy manokana.
Saingy, ny fomba tsara indrindra dia ny fanakarena ny serivisy amin'ny Agence Marketing Marketing feno, toa an'i Semalt, ary avelao izy ireo hikarakara ny filàn'ny varotra an-tserasera rehetra.